Ukuveliswa kweFektri ye-China yamandla kunye neFektri | Ilanga
1. Elonaqondo lobushushu liphezulu le-cable conductor yi-90 ° C. Xa isekethe emfutshane (elona xesha lide alidluli kwi-5S), lelona liphezulu
Ubushushu abudluli kuma-250 ° C.
2. Ubushushu obungqonge xa ​​ubeka intambo akufuneki bube ngaphantsi kwe-0 ° C
3. Irediyamu yokuguqa evumelekileyo ngexesha lokubeka: intambo enye engundoqo ayikho ngaphantsi kwamaxesha ali-15 ububanzi bangaphandle bekhebula; intambo ye-multi-core ayikho ngaphantsi kwamaxesha ali-10 ubukhulu bangaphandle bekhebula.
Iimeko zokusetyenziswa kwegama leModeli
Umzekelo \_ Igama \_ Iimeko zokuSebenzisa
YJV YJLV ubhedu \_ (ialuminiyam) enqamlezileyo enqamlezileyo i-PVC iintambo zombane ezifakiweyo kunye nezibiweyo zibekwe ngaphakathi, kwimijelo kunye nemibhobho, kwaye zingcwatyelwa kumhlaba ovulekileyo, kwaye azikwazi ukumelana namandla angaphandle.
I-YJV22 YJLV22 \_ I-Copper (i-aluminium) engundoqo enqamlezileyo ye-PVC ityhubhu yentsimbi yentsimbi yamandla ombane \_ ibekwe phantsi komhlaba kwaye inokumelana nemikhosi yangaphandle, kodwa ayinakumelana nemikhosi emikhulu yokuqina
I-YJV32 YJLV32 \_ I-Copper (i-aluminium) engundoqo ye-XLPE igqunywe ngocingo olucekeceke lwentsimbi ye-PVC yamandla ombane \_ Ilungele indawo eziphakamileyo, intambo inokumelana namandla oomatshini bangaphandle kunye noxinzelelo olukhulu
Uluhlu lweenkcukacha zekhebula ye-2
Iintambo ze-YL XLPE ezifakwe kwi-inshurensi zisetyenziswa ngokubanzi kwimisebenzi nakwizicelo, ezinje ngokunqongophala kwamandla kummandla osentshona kunye nophuhliso lweentambo zasemaphandleni ezintle ezisuka ngaphantsi kweentambo ze-AC eziphantsi komhlaba (iintambo ezifakwe kwi-polyethylene ezinqamlezileyo). Izinto zekhebula ze-PVC, iintambo zePVC, iintambo zombane ezifakwe kumbhobho zeplastiki zahlulwe zaba zeziguqululi zombane ziphantsi zilandelayo zidityaniswe kwizixhobo zombane ophantsi, ii-XLPE iintambo zomaleko wesithathu ezikhutshiweyo zombane zamandla ombane zilungele inguqu kunye nolwakhiwo lweegridi zamandla eziphantsi komhlaba ezilalini. Unxibelelwano oluphakathi. Iintambo zombane zePVV VV, VV22, VVP, VVR, enxulumene nomnqamlezo.
Intambo ye-YJV, intambo ye-YJV22, intambo ye-YJV32.
Flame nekudodobalisa intambo
Ucingo olunganyangekiyo nomlilo kunye nentambo
Ubushushu bePVC efakwe kwi-cable ye-PVC ekhutshwe ngokubeka iliso kwiisekethi kunye neesekethe zokukhusela ngama-70 degrees Celsius. Yahlulahlulwe yaba ziintambo zobhedu zobhedu ezikhuselekileyo, iintambo zeplastikhi zolawulo, igama elipheleleyo lePVC zigqunyiwe kwaye zilawulwa ziintambo zolawulo. Umgangatho wokuphunyezwa yi-GB9330-86. Kufanelekile ukuba kulawulwe i-AC elinganiswe ngombane i-750V nangaphantsi. Itheyiphu yobhedu ikhusele intambo, intambo exhobileyo, intambo yolawulo lwedangatye okanye ukusebenza okungatshiyo.
Intambo yokulawula i-PVC
I-KVV, KVV22 KVVR
Flame nekudodobalisa ucingo kunye cable
ZRKVV, ZRKVV ZRKVV22. Ulawulo lwentambo ekhuselweyo ye-KVVP, KVVRP KVVRP amaxesha ama-2, i-KVVP22 intambo enganyangekiyo nomlilo i-NHKVV NHKVV22. Iintambo zerabha ezigudluziweyo zahlulwe zaba ziintambo eziphezulu zerabha ezigudluziweyo kunye ne-750V ngokubanzi zerabha ezigudluziweyo. Ukusetyenziswa: iintambo eziguquguqukayo zerabha-sheathed eziguqukayo ezine-AC ezilinganiswe ngee-voltage ze-6kV nangaphantsi, izixhobo zokuhambisa umbane, oomatshini bemigodi, ukuphakamisa kunye nokuhambisa oomatshini. Iintambo eziguquguqukayo zerabha ephothiweyo zilungele izixhobo zombane, izixhobo zamandla kunye nezixhobo ezahlukeneyo zombane ezihamba nge-AC ezinemilinganiselo ye-750V nangaphantsi. Zintathu iindidi zeentambo: ukukhanya, phakathi kunye nobunzima.
Egqithileyo Cable yamandla
Okulandelayo: Cable yamandla 22
Ulawulo lweCandelo kvv